Miara-miasa amin'ny rakitra .htaccess Ao amin'ny WordPress | Martech Zone
WordPress dia sehatra lehibe iray izay nihatsara kokoa tamin'ny alàlan'ny antsipiriany sy ny tanjaky ny dashboard WordPress mahazatra. Afaka mahatratra zavatra betsaka ianao, amin'ny lafiny fanaingoana ny fomba tsapan'ny tranokalanao sy ny asany, amin'ny alàlan'ny fampiasana fotsiny ireo fitaovana natolotry ny WordPress anao ho fenitra.
Misy fotoana amin'ny fiainan'ny tompona tranonkala rehetra, na izany aza, rehefa mila mihoatra ny fampiasa io ianao. Miara-miasa amin'ny WordPress rakitra .htaccess dia mety ho fomba iray hanaovana izany. Ity rakitra ity dia rakitra fototra iankinan'ny tranokalanao, ary miahiahy indrindra amin'ny fomba fiasan'ny permalinks an'ny tranokalanao.
Ny rakitra .htaccess dia azo ampiasaina hahatratrarana zavatra mahasoa maromaro. Efa nandrakotra ny sasany amin'izy ireo isika teo aloha, anisan'izany ny fizotrany amin'ny fanaovana fanovana regex ao amin'ny WordPress, ary topimaso ankapobeny momba ny redirects header for WordPress. Amin'ireo torolàlana roa ireo dia niditra sy nanitsy ny rakitra .htaccess izahay, nefa tsy nanazava betsaka momba ny antony mahatonga ilay fisie eo amin'ny toerana voalohany, sy ny fomba hampiasanao azy.
Izany no tanjon'ity lahatsoratra ity. Voalohany, hojerentsika izay ataon'ny rakitra .htaccess amin'ny fametrahana WordPress mahazatra. Avy eo, hazavainay ny fomba ahafahanao miditra ao aminy, sy ny fomba hanovanao azy. Farany, hasehonay anao ny antony mety hanaovanao izany.
Inona ny rakitra .htaccess?
Andao esorintsika aloha ny fotony. Ny rakitra .htaccess dia tsy ara-teknika a File WordPress. Na, raha hametraka azy tsara kokoa, ny rakitra .htaccess dia rakitra izay ampiasain'ny mpizara tranonkala Apache. Ity no rafitra ampiasaina ankehitriny avy amin'ny ankamaroan'ny tranokala WordPress sy mpampiantrano. Noho ny fahaizan'ny Apache momba ny fitantanana tranokala WordPress, ny tranonkala tsirairay dia manana rakitra .htaccess.
Ny rakitra .htaccess dia mizara toetra vitsivitsy amin'ireo rakitra hafa ampiasain'ny tranokalanao WordPress ho fanamboarana. Ny filename dia rakitra miafina ary mila esorina tsy hadika ny fanovana azy. Izy io koa dia mipetraka ao amin'ny lahatahiry faka an'ny tranokalanao WordPress.
Tadidio fa ny rakitra .htaccess dia manao zavatra iray ary zavatra iray ihany: mamaritra izany ny fomba anehoana ireo permalinks an'ny tranokalanao. Dia izay.
Ny miafina ao ambadik'ity famaritana tsotra ity dia be pitsiny. Izany dia satria maro ny tompona tranokala, plugins ary lohahevitra no manova ny fomba fampiasana permalink ao anatin'ny tranokalanao WordPress. Isaky ny manao fanovana (na plugin) ianao amin'ny fomba fiasan'ny permalinks anao, ireo fanovana ireo dia voatahiry ao anaty rakitra .htaccess.
Mitady sy manitsy ny rakitra .htaccess
Na eo aza ny fisian'ilay rakitra .htaccess namboarina indrindra hifehezana ireo permalink ao amin'ny tranokalanao, azonao atao ny manitsy ny fisie mba hahatratrarana vokatra mahasoa maromaro: ao anatin'izany ny fanovana làlana, na fanatsarana fotsiny ny fiarovana ny tranokalanao amin'ny famerana ny fidirana ivelany mankany pejy manokana.
Amin'ity fizarana ity dia hasehonay anao ny fomba hanaovana izany. Fa aloha…
FAMPITANDREMANA: Ny fanovana ny rakitra .htaccess dia mety hanimba ny tranokalanao.
Mampidi-doza ny fanovana ireo rakitra fototra ifotoran'ny tranokalanao. Ianao dia tokony backup foana ny tranokalanao alohan'ny hanovana azy, ary andramo nefa tsy misy fiatraikany amin'ny tranokala mivantana.
Raha ny marina dia misy antony marim-pototra tsy ahitan'ny ankamaroan'ny mpampiasa WordPress ilay rakitra .htaccess. WordPress dia manana ny ampahany betsaka amin'ny tsena ho an'ny tranokala orinasa kely, ary midika izany fa maro amin'ireo mpampiasa azy ireo no, hoy isika, fa tsy ireo mirona amin'ny lafiny teknika. Izany no mahatonga ny fisie .htaccess dia takona afenina - hialana amin'ireo mpampiasa vao manao fahadisoana.
Midira sy manitsy ny rakitra .htaccess
Miaraka amin'ireo rehetra izay tsy mandeha amin'ny lalana, andao jerena ny fomba ahafahanao miditra amin'ny rakitra .htaccess. Mba hanaovana izany:
Mamorona fifandraisana amin'ny tranonkala mampiasa mpanjifa FTP. Misy mpanjifa FTP maimaimpoana be dia be any, ao anatin'izany FileZilla. Vakio amin'ny alàlan'ny antontan-taratasy omena mba hampifandraisana FTP amin'ny tranokalanao.
Raha vantany vao nametraka fifandraisana FTP ianao, dia haseho anao ireo rakitra rehetra mandrafitra ny tranokalanao. Topazo maso ireo lahatahiry ireo, dia hahita olona iray antsoina hoe root Directory.
Ao anatin'ity fampirimana ity dia ho hitanao ny fisie .htaccess. Amin'ny ankapobeny dia eo akaikin'ny tampon'ny lisitry ny fisie ao amin'io fampirimana io. Tsindrio ilay rakitra, ary avy eo kitiho ny zahana / amboary.
Hisokatra ao amin'ny tonian-dahatsoratra ny rakitra.
Ary dia izay. Mahazo mamela anao hanova ny rakitrao izao, nefa mariho fa mety tsy te hanao izany ianao. Hatoronay anao ny fomba fampiasana an'ity rakitra ity ao amin'ny fizarana manaraka, saingy alohan'ny hanaovanay azy dia tsara ny hevitrao manaova kopia eo an-toerana ny fisie .htaccess (mampiasa ny fifanakalozan-kevitra mahazatra "save as"), ataovy eo an-toerana ny fanovana anao, ary ampidiro amina tranokala mihetsika (araka ny nomarihinay etsy ambony).
Mampiasa ny rakitra .htaccess
Vonona ny hampiasa ny fampiasa fanampiny omen'ny rakitra .htacess ianao izao. Andao hanomboka amin'ny fototra vitsivitsy.
301 redirects - Ny redirect 301 dia kaody kely izay mandefa mpitsidika avy amin'ny pejy iray mankany amin'ny iray hafa, ary ilaina izany raha mamindra lahatsoratra bilaogy manokana mifamatotra amin'ny tranokala ivelany ianao. Raha tsy izany, azonao atao ny mampiasa ny rakitra .htaccess hanodinana ny tranokala. Azonao atao koa ny mitarika ireo mpitsidika amin'ny kinova HTTP taloha an'ny tranokala mankany amin'ny kinova HTTPS vaovao sy azo antoka kokoa. Ampio ity amin'ny rakitra .htacess:
Security - Misy fomba maromaro ihany koa hampiasana ny rakitra .htaccess hampiharana paikady fiarovana mandroso ho an'ny WP. Ny iray amin'izany dia ny hidio ny fidirana amin'ireo rakitra manokana hany ka ireo mpampiasa manana fanamarinana marina ihany no afaka miditra amin'ireo rakitra fototra andehanan'ny tranokalanao WordPress. Azonao atao ny mampiasa an'io kaody io, ampidirina ao amin'ny faran'ny fisie .htaccess anao, mba hamerana ny fahazoana miditra amin'ireo rakitra fototra maromaro:
Hanova URL - Endri-javatra mahasoa iray hafa amin'ilay rakitra .htaccess, na dia sarotra kokoa aza ny hampihatra azy, dia ny fampiasana ilay rakitra mba hifehezana ny fomba fisehoan'ny URL rehefa miditra amin'ny tranokalanao ny mpitsidika anao. Mba hanaovana izany dia mila mahazo antoka ianao fa mampiasa ny kinova Apache farany indrindra. Io dia mampiavaka ny mpitsidika ny URL an'ny pejy iray. Ity ohatra farany ity dia angamba - sarotra loatra ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa vao zatra ilay rakitra .htaccess. Na izany aza, nampidiriko izy io mba hampisehoana aminao ny haben'ny zavatra azo tratrarina amin'ny fisie. Ampidiro amin'ny rakitra .htaccess ity:
Handeha lavitra miaraka amin'ny .htaccess
Ny fiaraha-miasa amin'ny rakitra .htaccess dia fomba tsara hianarana momba ny fomba fiasan'ny tranonkalanao WordPress amin'ny sehatra lehibe kokoa, ary hanomezana topy maso ny habaka goavana ho an'ny fanamboarana izay na dia tranokala WP mahazatra aza dia manome anao. Raha vantany vao nahay niara-niasa tamin'ny rakitra .htaccess ianao tamin'ny alàlan'ny fanovana ny fanovana fototra efa notantarainay tery ambony dia afaka manokatra safidy malalaka ianao. Ny iray, araka ny efa noresahintsika teo aloha, dia ny fahaizana avereno ny bilaoginao WordPress.
Ny iray hafa dia ny maro amin'ireo fomba hanatsarana ny fiarovana ny WordPress dia misy fanovana mivantana ny rakitra .htaccess, na ny fampiasana ny rafitra FTP iray ihany hanovana ireo rakitra root hafa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha vao manomboka mijery ny voanjo sy ny kofehin'ny tranokalanao ianao, dia hahita fahafaha-manao farany tsy manam-paharoa sy fanatsarana.
Tags: 301 redirectmamelamandà amin'ny rehetrafilezillaamin'ny ftp.htaccessfisie htaccessfilaharana htaccesshtaccess manova urlfanoratana indray htaccesshtaccess fiarovanamandà baikoMy NotesWordPressbackup WordPress
Gary Stevens dia mpamorona lohalaharana. Geek blockchain iray manontolo andro izy ary mpilatsaka an-tsitrapo miasa amin'ny fototra Ethereum ary koa mpandray anjara mavitrika Github.